Semalt को उत्पादनहरु को समीक्षा र कसरी ती तपाईलाई Google खोजको शीर्ष १० मा रेन्क गर्न सक्दछन्
गुगलको पहिलो पृष्ठले ट्राफिकको% २% नियन्त्रण गर्दछ । यो तपाइँको व्यवसाय को लागी के मतलब हो? यसको मतलब यो हो कि SEO पहिले भन्दा बढि महत्त्वपूर्ण छ।
जब तपाईं व्यापार चलाइरहनुभएको छ, कुञ्जीशब्द घनत्व, ब्याकलिinking्क, र खोजी प्राधिकरण जस्ता चीजहरूको लागि खोजी गर्दा यसले ठूलो समय लिन सक्दछ। जब तपाइँ यसलाई तपाइँको ग्राहकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्दै जुगल गर्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यो असम्भव हुन्छ। यो जोड हो किन तपाईं एसईओ मा पेशेवरहरूको एक टीम बाट समर्पित कामको आवश्यकता छ।
Semalt प्रस्तुत गर्दै
Semalt एक कम्पनी हो जसले एसईओको महत्त्वलाई अगाडि राख्यो। तिनीहरू कम्पनीहरूमा समर्थन प्रदान गर्दछन् जुन इन-हाउस SEO विशेषज्ञहरूसँग छैन।
तिनीहरू आफ्नो सेवाहरूको १--दिन नि: शुल्क परीक्षणको साथ SEO साथ अपरिचित व्यक्तिहरूसँग पनि काम गर्छन्। तिनीहरूसँग एउटा उत्पादन पनि छ जुन विशेष रूपमा प्राविधिक पक्षमा जान नचाहनेहरूको लागि हो: AutoSEO।
तिनीहरूको सफलताको कहानी स्थापना गर्दै
Semalt एक कम्पनी हो जसले आफैलाई प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डमा गर्व गर्दछ । उनीहरूसँग धेरै सफलताका केसहरू छन्, जसमध्ये केहीले धेरै उल्लेखनीय वृद्धि देख्दछन्। सर्जरी टीआरको मामलामा उनीहरूले १ in गुणा उपस्थिति बढाए। तपाईं तल तिनीहरूको ट्राफिकको विवरण हेर्न सक्नुहुन्छ।
AutoSEO चार महिना को लागी १9 keywords खोजशब्दहरु को लागी शीर्ष १०० मा राख्छ। के उनीहरूले शीर्ष १० मा ल्याए फुल्सेओ प्याकेज थियो। यस प्याकेजले ती सेवाका लागि खोजी गरिरहेका व्यक्तिहरूको लागि ती मायालु% २% ट्राफिकमा हिट हुन अनुमति दियो। हामी यी सर्तहरूको अझ विस्तृत समीक्षा पछि छलफल गर्नेछौं, तर साधारण केस भनेको यो हो: Semalt ले काम गर्दछ।
Semalt एक पूर्ण-स्ट्याक एजेन्सी हो जसले एसईओ का लागि स्तर निर्धारण गर्न चाहिने कुनै पनि कम्पनीलाई ह्यान्डल गर्न निर्मित व्यक्तिहरूको विविध समूह राख्छ। तिनीहरू एक वैश्विक संगठन हो, त्यसैले तपाईं उनीहरूसँग साझा भाषा बोल्नुहुन्छ।
तपाईं उनीहरूसँग स्काईप, WhatsApp, telegram.me, ईमेल, वा टेलिफोनमा कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। तपाइँ सबै तिनीहरूको कर्मचारी पृष्ठ मा आफ्नो टीम देख्न सक्नुहुन्छ । तपाईं उनीहरूको कछुवाको प्रशंसा गर्न केहि समय लिन सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं यो पढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एसईओमा रुचि राख्नुहुन्छ। तपाईं एक स्वतन्त्रकर्ता, सानो व्यवसाय मालिक, वा साथी मार्केटिंग एजेन्सी हुन सक्छ।
जे भए पनि, तपाईले उद्योगको केही अंश बुझेर पछाडि जानुहुने छैन।
एसईओ, वा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन, तपाईंको वेबसाइटको निर्माण यसरी गरिरहेछ कि जब व्यक्तिहरूले एक खास सर्त खोजी गर्दछन्, तिनीहरूले तपाईंलाई फेला पार्दछन्। यी सर्तहरू, वा कीवर्डहरू, तपाईंको वेबसाइटमा ट्राफिकको मात्रा बढाउँदछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाई राइनोप्लास्टीका लागि चिनिने प्लास्टिक सर्जन बन्न चाहानुहुन्छ भने तपाईको कुञ्जी शब्दहरुमा "राइनोप्लास्टी सर्जरी" वा "सस्तो राइनोप्लास्टी" समावेश हुन सक्छ।
गुगलको एल्गोरिथ्म एक तरीकाले निर्माण गर्दछ जहाँ यसले व्यक्तिलाई प्रासंगिक, आधिकारिक वेबसाइटहरूमा लिंक गर्दछ। माथिको उदाहरण हेर्नुहोस्, जसले "rhinoplasty" कुञ्जी शब्द प्रयोग गर्दछ। तिनीहरू आधिकारिक पनि छन् किनकि तिनीहरू विश्वासयोग्य स्रोतहरूबाट आउँदछन्। यो क्रलर बाहिर पठाउँदै गर्दछ, वा वेबसाइट स्क्यान गर्न बट्स निर्माण। क्रॉलरहरूले विभिन्न फरक कारकहरूमा आधारित गुण निर्धारण गर्दछ।
प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरू ती शब्दहरू हुन् जुन एल्गोरिथ्मले सोच्छन् जुन तपाईंको सामग्रीलाई परिभाषित गर्न सबैभन्दा उपयुक्त छ।
ब्याकलिks्कहरू तपाईंको सामग्रीको लिंकहरूको संख्या हो जुन अन्य वेबसाइटहरूमा देखा पर्दछ, विशेष गरी जब ती वेबसाइटहरूलाई अधिकार मानिन्छ।
लिंक भवन ब्याकलि back्क स्थापनाको प्रक्रिया हो।
सामाजिक मेट्रिक्स जस्तै साझेदारी र पुन: ट्वीटहरू
त्यहाँ धेरै अन्य कारकहरू छन् जुन एसईओमा जान्छ, र हामी यहाँ सबैमा प्रवेश गर्दैनौं, तर यी महत्त्वपूर्ण छन् तपाईलाई यो जान्नको लागि कि Semalt का सुविधाहरूमा जान्छ। हाम्रो ब्ल्गको SEO मा अधिक विस्तृत मार्गनिर्देशन छ तपाईले यस विषयको गहिराइमा खोजी गर्न चाहानुहुन्छ।
कसरी Semalt का उत्पादहरु तपाइँको एसईओ को बढ़ावा
अब हामीसँग हामी केमा डलिरहेका छौं भन्ने बारे अझ राम्रो सोच छ, हामी Semalt को उत्पादनहरु मा अधिक स्पष्टता संग जान सक्छौं। हामी तिनीहरूको उत्पादन ट्याब अन्तर्गत फेला परेका क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुन्छौं चीजहरू शुरू गर्नका लागि। यसमा समावेश छन्:
वेबसाइटले परिभाषित गर्दछ कि AutoSEO ती व्यक्तिहरूको लागि हो जुन आफ्नो वेबसाइटको कारोबार बढाउन चाहान्छन्, तर धेरै पैसा लगानी नगरी। AutoSEO आधारभूत उत्पादन हो जो SEO मा जान चाहान्छन्। १ 192 २ भन्दा बढी देशहरूमा १ 14 हजार मानिससँग पदोन्नतिको अंश छ, यसले लोकप्रियताको राम्रो सौदा प्राप्त गरेको छ।
यस लोकप्रियताको ठूलो कारण भनेको उनीहरूले प्रस्ताव गरेको १ 14-दिन। AutoSEO अधिग्रहण गरेर, एक विशेषज्ञ तपाइँको साइट को विश्लेषण गर्न को लागी तपाइँको खातामा काम तोकिन्छ। एसईओ विशेषज्ञहरूले कुञ्जी शव्दहरू फेला पार्नेछन् जुन सामान्य रूपमा तपाईंको उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ, तर पर्याप्त अनौंठो तपाईंलाई खरीद गर्न खोज्ने दर्शकहरूको साथ प्रदान गर्न।
Semalt आफ्नो विश्लेषण प्रणाली को माध्यम बाट रैंकिंग रिपोर्टहरु प्रदान गर्दछ। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि तपाईंको कम्पनीले ड्याशबोर्डमा हेरेर के गरिरहेछ, जुन लग इन भएको बेला मुख्य सुविधा हो।
तपाईको उद्योगमा कुञ्जी शव्दहरूको विश्लेषण पछि, अन्तिम लक्ष्य भनेको तपाइँको वेबसाइटमा लिंकहरू निर्माण गर्नु तपाइँको पनी किवर्डहरू छन् भनेर निश्चित गर्न।
उनीहरूले एch्कर लिize्कहरू पनि प्रयोग गर्छन् जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई पृष्ठमा विशेष बिन्दुमा लैजान्छ जुन उनीहरूसँग प्रासंगिक छ। AutoSEO यी एन्कर लि the्कहरू गैर-एch्करको साथ संयोजन गर्दछ तपाईको ब्रान्ड नाम लि links्कहरू यस कुञ्जी शब्दहरूको साथसाथ आधिकारिक स्रोतहरूको रूपमा स्थापना गर्न।
यस प्रणालीमा मूल्य निर्धारण प्रति महिना $ $ to देखि लगभग $ ००० प्रति वर्षको बीचमा भिन्न हुनेछ। तपाइँ तपाइँको अभियान को लम्बाई एक महिना, तीन महिना, छ महिना, वा एक वर्ष हुन को लागी चुन्न सक्नुहुन्छ। तुलना गरेर, धेरै अन्य SEO वेबसाइटहरूको आधारभूत मूल्य छ campaigns 1000 मा उनीहरूको अभियानको लागि। तिनीहरूको प्याकेजहरू पनि कम विकल्पहरू छन्।
फुलसेओ AutoSEO को उन्नत संस्करण हो। यस र AutoSEO बीच सब भन्दा महत्त्वपूर्ण फरक यो हो कि तपाईंसँग Semalt प्रबन्धक तपाईंको मामलामा माना .्कन गरिएको छ। प्रबन्धकले सुरूमा एसईओ विशेषज्ञसँग काम गर्दछ, र त्यसपछि तपाईंलाई आफ्नो अभियानको प्रगतिमा नियमित रिपोर्ट पठाउँदछ।
फुलसेओ तपाईंको व्यवसायको भविष्यमा लगानी हो। आरओआई, वा लगानीमा फिर्ता, प्राय: prior००% पूर्व ग्राहकहरूको अनुभवमा आधारित छ। प्रत्येक १०० डलरमा जुन तपाईं यसमा खर्च गर्नुहुन्छ, तपाईं 700०० फिर्ता कमाउनुहुन्छ।
उदाहरण को लागी, मेक्सिको मा एक घर जग्गा एजेन्सी को यातायात मा करीव 700००% को वृद्धि भएको थियो, उनीहरुलाई धेरै कुञ्जी शब्दहरु मा नम्बर एक स्लट जान को लागी। 24२ keywords कीवर्डहरूको लागि शीर्ष स्लटमा हुँदा, यसले तिनीहरूलाई मेक्सिकोमा सम्पत्ति खोज्नेहरूलाई सजिलैसँग लक्षित गर्न अनुमति दिन्छ। FullSEO बिना, तिनीहरूले यातायातको यो स्तर कहिल्यै देखेका थिएनन्।
अन्य कम्पनीहरूले गरिरहेको कामको तुलनाको लागि हामी वेबएफएक्समा हेर्न सक्छौं । WebFX ले SEO सुविधाहरू र विश्लेषण उपकरणहरूको प्रभावशाली एरे प्रदान गर्दछ। यद्यपि, Semalt सँग तिनीहरूको मूल्य निर्धारण विकल्पहरूमा अधिक भिन्नता छ।
साना व्यवसायहरूको लागि जससँग सानो बजेट हुन्छ, यो अधिक सस्तो हुन्छ। फुलसेओ विकल्प अन्तर्गत, Semalt तपाईंलाई उनीहरूको स्थानीय एसईओ प्याकेजको लागि मूल्य उद्धरण प्राप्त गर्न खुसी छ। Semalt ले तपाईंको बजेटसँग काम गर्न खोज्छ। उनीहरूको वेबसाइटको द्रुत स्क्यानले न्यूनतम मासिक लागत $5per per प्रतिमाह देखाउँदछ।
तपाई सम्भवतः १ 14-दिनको परीक्षण र AutoSEO प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ यसको विचारमा आफैलाई सजिलो पार्न। जहाँसम्म, तपाईले बिभिन्न वेबसाइट प्रयोग गर्नु पर्ने हुन सक्छ, किनकी Semalt ले तपाईंलाई भन्दछ कुन प्याकेज प्रत्येक साइटको लागि उत्तम काम गर्दछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, अन्य खुद्रा विक्रेताहरूले Semalt सँग उत्पादनको समान भिन्नता प्रदान गर्दैन।
E- वाणिज्य SEO के हो?
Semalt जोसँग ई-वाणिज्य, वा अनलाइन स्टोर, आवश्यकताहरू छन् को लागी एक विशेष उत्पाद प्रदान गर्दछ। यो प्याकेज पहिले नै उल्लेख गरिएको जस्तो छ र AutoSEO र FullSEO उत्पादको विस्तारको अधिक हो।
Semalt ले कम आवृत्ति कुञ्जी उत्पादन र ब्रान्डमा आधारित लक्ष्य गर्दछ। कुञ्जीशब्दहरू जुन तपाईलाई र्याक गर्नुपर्दछ, वा कुञ्जीशब्दहरू उनीहरूले सुझाव दिन्छन्, व्यक्ति वरिपरि केन्द्रित छन् जो एक खास उत्पादन खोजिरहेका छन्।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं एक विशेष कीवर्ड, "सस्तो पुरुष घडी जो महँगो देखिन्छ" को साथ श्रेणीकरण गर्न चाहानुहुन्छ, तपाईले देख्नुहुनेछ कि हालको शीर्ष सूचिले एक सूची पोष्ट वा भिडियो समावेश गर्दछ।
ई-वाणिज्यको साथ, तपाईले यी १० दश सूची वा भिडियो बीचमा तपाइँको हेराई पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। केहि राम्रो राखिएको कुञ्जी शब्दहरू र एसईओ बूस्टि Withको साथ, तपाइँ तपाइँको व्यवसायलाई उही आधिकारिक तहमा यस कुञ्जीशब्दको लागि ल्याउनुहुनेछ।
एनालिटिक्स भनेको के हो?
एनालिटिक्स एक शब्द हो धेरै कम्पनीहरू द्वारा। गुगलसँग पूरा अनुप्रयोग छ जसमा ट्र्याक गर्न तपाईंको भुक्तान गरिएका विज्ञापनहरू Google एनालाइटिक्स कसरी गरिन्छ। यो उत्पादन AutoSEO र FullSEO को एक पक्षको अधिक हो, र ड्यासबोर्ड दुबै उत्पादको साथ आउँदछ।
Semalt को विश्लेषण उपकरण ले उपभोक्तालाई यस्तो विश्वास गर्दछ कि सजीलो पढ्न सकिन्छ। यसले Semalt लाई जवाफदेहीताको स्रोत प्रदान गर्दछ, तपाईंलाई तपाईंको भुक्तान अभियानहरूको प्रमाण दिएर। मानिस विश्लेषणात्मक सुविधा को उपयोग गरीरहेका छन्।
गहन विश्लेषणले तपाइँलाई तपाइँका प्रतिस्पर्धीहरूलाई निगरानी गर्ने क्षमता प्रदान गर्दछ, नयाँ बजारहरू पहिचान गर्नुहोस्, र त्यस सूचनालाई क्यापिटलाइज् गर्न आवश्यक सिफारिश कुञ्जी शब्दहरू प्राप्त गर्नुभयो। साथै, Semalt तपाईंलाई दिनको कुनै पनि समयमा तपाईंको स्थिति ट्र्याक गर्न अनुमति दिँदछ।
SSL के हो?
जब तपाईं देख्नुहुन्छ वेबसाइट HTTP बाट HTTPS मा जान, यो प्रयोगमा SSL प्रमाणपत्रको उदाहरण हो। यस सुरक्षा सुविधाले तपाइँको लगतलाई एन्क्रिप्ट गर्दछ जसले गर्दा हेकरहरू लाई क्रेडिट कार्ड डेटा जस्ता पहिचान जानकारीमा पहुँच गर्न गाह्रो हुन्छ।
यो एक आवश्यकता हो यदि तपाईं एक ई वाणिज्य वेबसाइट वा सेवा आधारित वेबसाइट हो कि कुनै पनि संवेदनशील ग्राहक डाटा स्टोर। साथै, यदि गुगलले तपाईंको साइटलाई एक सुरक्षित स्थानको रूपमा पहिचान गर्दछ भने, यसले उच्च पदहरूमा पुग्ने राम्रो मौका हुनेछ।
कसरी Semalt तपाइँलाई शीर्ष १० मा रैंक गर्न मद्दत गर्दछ को एक सारांश
एक प्रमाणित ट्र्याक रेकर्डको साथ, सयौं संतुष्ट ग्राहकहरू, र पेशेवरहरूको एक विविध टोली, Semalt व्यक्तिको मूल्य-सचेत टोली हो जो तपाईंसँग काम गर्न इच्छुक छन् तपाईं आफ्नो लक्ष्यहरू पूरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सुनिश्चित गर्न।
हामीले देख्यौं कि कसरी AutoSEO, FullSEO, E- वाणिज्य EO, एनालिटिक्स, र SSL सबै तपाइँको वेबसाइट मा ट्राफिक ड्राइभिंग को लागी लाभ छ। उनीहरूको विशेषज्ञ र व्यवस्थापकहरूको टोलीसँग, तपाईंले महत्त्वपूर्ण कुञ्जी शव्दहरू फेला पार्नुहुनेछ, र ब्याकलिks्कहरू तपाईंको वेबसाइटलाई गुगलको शीर्षमा ल्याउन आवश्यक छ।